Abakhiqizi Nabahlinzeki Bezinto Ezisetshenziswayo Zezokwelapha - Imboni Yokusebenziseka Kwezokwelapha Yase-China
I-Eye Protective Medical Evalwe I-Anti-inkungu Izibuko Zokuphepha
Izibuko zokuphepha kwezokwelapha zingavimbela umuthi othile noma igazi ukuba lingachaphazeli ebusweni, ngaleyo ndlela zivikele amehlo.Lolu hlobo lwezibuko ngokuvamile lusetshenziswa kanye nezifihla-buso namakepisi okuhlinzwa ukuze kunikeze ukuvikelwa okuphelele kwekhanda likadokotela.
1ml Isirinji Sokugoma Esilahlwayo Nenaliti
1ml isirinji elahlwayo, iLuer slip/Luer Lock, 3part, blister/PE packing, amasampula amahhala.
Imaski yokuhlinzwa yezokwelapha ivikela kakhulu kunamaski wezokwelapha, futhi izingane zingawagqoka.Uma ingane isencane kakhulu, kunconywa ukusebenzisa imaski ekhethekile yezingane, ngakho-ke uhlobo oluvaliwe luzoba ngcono.
1. Ukuze kuqinisekiswe impilo yengane, iklanywe ngezinga lokusebenzisa imaski yokuhlinza.
2. Ukuze kugqokwe kangcono, kwenziwa ngohlobo lwezingane.Ubukhulu bemaski yengane: 14.5 * 9.5cm.
Ukusebenza kahle kokuhlunga kwemaski kwe-KN95 kufinyelela kuma-95%.
Abanye abacwaningi benze izifundo ezifanele mayelana nokusebenza kahle kokuvikela kanye nesikhathi sokugqoka imaski yokuvikela yezokwelapha engu-N95.Imiphumela yabonisa ukuthi ukusebenza kahle kokuhlunga kwahlala kungaphezu kwama-95% futhi ukumelana nokuphefumula akuzange kushintshe kakhulu ngemva kwezinsuku ezingu-2 zokugqoka ama-respirators e-KN95. Ukusebenza kahle kwesihlungi kwehliselwe ku-94.7% ngemva kwezinsuku ezingu-3 zokugqoka.
Uma igqokwe kahle, ikhono lokuhlunga le-KN95 lingaphezu kwamamaski ajwayelekile nawezokwelapha.